I-Surface Go: enye indlela eya kwi-iPad nge Windows 10 futhi cishe ngentengo efanayo | Izindaba zamagajethi
I-Surface Go: enye indlela eya kwi-iPad ne Windows 10 futhi cishe ngentengo efanayo
U-Ignacio Sala | | AmaLaptops, Tablets
Kusukela kwethulwe imodeli yokuqala ye-iPad, emuva ngonyaka we-2010, inkampani esekwe eCupertino ibilokhu imaka indlela eya phambili yalesi simiso semvelo, uhlelo lwezemvelo olube nezikhathi ezinzima naphansi ngenxa yezinga eliphansi lokuvuselelwa ngabasebenzisi. Yize i-Apple ifake izici ezintsha eminyakeni yamuva kunguqulo ye-iOS ye-iPad, lokhu iyaqhubeka nokuhlinzeka ngemikhawulo eminingi.
IMicrosoft ibuye yadala uhlelo olusha lwamaphilisi, kepha ngokungafani nemodeli ka-Apple, lawa iphethwe yinguqulo ephelele yeWindows, evumela abasebenzisi ukuthi baphathe kamnandi ithebhulethi yabo nomaphi lapho bafuna khona, ukufinyelela kunoma yiluphi uhlobo lohlelo abaludingayo, ngaphandle kokusebenzisa izinhlelo ezithwalwa kwithebhulethi, njengoba kunjalo nge-iPad. Kepha bekungekho ngentengo.
Inkampani esekwe eRedmon isanda kuveza okungaba enye indlela evumelekile kakhulu kubo bonke labo basebenzisi abafuna ithebhulethi eguquguqukayo, engabizi kakhulu enenguqulo ephelele yeWindows 10. Sikhuluma ngeSurface Go. I-Surface Go iyithebhulethi ye- Amasentimitha ayi-10, enobukhulu obungu-243,8 x 175,2 no-7,6 millimeters kanye nesisindo esingu-544 gram. Uma sengeza ikesi lekhibhodi lekhava yohlobo, isisindo sikhuphuka sibe ngama-gram angu-771.
1 Imininingwane ye-Surface Go
2 Intengo nokutholakala kweSurface Go
3 Ukunweba umndeni wakwaSurface
Imininingwane ye-Surface Go
ISurface Go isinikeza ifayela le- Isifundi sekhadi le-MicroSD, i-headphone jack kanye nembobo ye-USB-C. Ngaphakathi, iWindows isinikeza ukumiswa okubili okuhlukile ngokuya ngenguqulo yohlelo lokusebenza: Windows 10 Ikhaya elinemodi ye-S futhi Windows 10 Pro nge-S Mode. I-Windows S inguqulo ye-Windows evumela kuphela wena ukufaka izinhlelo zokusebenza ezitholakala esitolo sohlelo lokusebenza lwe-Microsoft, yize sikwazi vula le modi ukuguqula idivaysi ibe yi-PC ozoyisebenzisa nokufaka noma yiluphi uhlelo.
Mayelana nokucaciswa kwezobuchwepheshe, iSurface Pro iphethwe iprosesa le-Intel Pentium Gold 4415Y 1,6 GHz.Ingaba yi-PC, ukusebenza kwayo kungahluka ngokuya ngenani le-RAM esilithola ngaphakathi. Le modeli iyatholakala nge Izinhlobo ze-4 no-8 GB ze-RAM. Mayelana nokugcinwa, iMicrosoft isinikeza amamodeli ama-3: i-64 GB eMMC, i-128 GB SSD ne-256 GB SSD.
Isikrini, esinye isici abasebenzisi abaningi abasicabangayo lapho bethenga ithebhulethi, sisinikeza a Iphaneli eyi-intshi engu-10 enesinqumo esingu-1.800 x 1.200 kanye nenani lesikrini elingu-3: 2. Ngokusho kweMicrosoft, ukuzimela kweSurface Go kufinyelela emahoreni ayi-9, ukuzimela okukubeka cishe kubude obufanayo ne-Apple iPad.
Le modeli entsha ebangeni leSurface, iyahambisana ne-Surface Pen, ifaka i- Ubakaki ohoxekayo ngemuva lokho kusivumela ukuthi sikubeke kunoma yisiphi isikhundla. I-Surface Pen, kanye ne-Type Cover efaka i-trackpad, ithengiswa ngokwehlukana.
Intengo nokutholakala kweSurface Go
IMicrosoft izothengisa iSurface Go ngo-Agasti 2 E-United States naseSpain, ngaphezu kwamanye amazwe, yize okwamanje, yinguqulo ye-Wifi kuphela ezotholakala ngaphandle koxhumano lwe-LTE, imodeli inkampani ethe izongena emakethe ezinyangeni ezizayo futhi intengo yayo ayikafiki kwembuliwe.
I-Surface Iya nge-4GB ye-RAM ne-64GB yesitoreji se-eMMC ngeWindows Home S: Amadola ka-399.
I-Surface Iya nge-4GB ye-RAM ne-64GB yesitoreji se-eMMC ngeWindows Pro S: Amadola ka-449.
I-Surface Iya nge-8GB ye-RAM ne-128GB yesitoreji se-SSD ngeWindows Home S: Amadola ka-549.
I-Surface Iya nge-8GB ye-RAM ne-128GB yesitoreji se-SSD ngeWindows Pro S: Amadola ka-599.
I-Surface Iya nge-8GB ye-RAM ne-256GB yesitoreji se-SSD ngokuxhumeka kwe-LTE: kulindwe ukuqinisekisa ukutholakala nentengo.
Izintengo ezingenhla yilezin kuphela eqenjini. Kokubili iType Cover, iSurface Pen negundane kudayiswa ngokwehlukana. Intengo yekhibhodi iyahluka phakathi kwamadola angama-99 no-129. Intengo yegundane ngu- $ 39 kuthi iSurface Pen ibe ngu- $ 99.
Sisesimweni esifanayo ne-Appl's iPade, lapho intengo ifaka kuphela idivayisi nalapho zonke izesekeli, ikhava yekhibhodi ne-Apple Pencil kuthengiswa ngokuzimela ngamanani aphezulu kunalawo ahlinzekwa yi-Microsoft ngalezi zinto zokusebenza.
Zonke izinhlobo zeSurface Go zifika emakethe zineWindows S, kungaba kunguhlobo lweKhaya noma kuhlobo lwePro. Le nguqulo isinikeza imikhawulo ethile lapho sifaka izinhlelo zokusebenza ngaphandle kweSitolo seMicrosoft, kepha uma sikubona udinga, singakwazi thuthukisela kunguqulo evamile yasekhaya ne-Pro ngokuphelele mahhala.
Ukunweba umndeni wakwaSurface
Ngokwethulwa kweSurface Go, iMicrosoft njengamanje inezinhlobo ezi-5 ezahlukahlukene emakethe ngaphakathi kwalolu hlu, ngaleyo ndlela iqinisekisa ukuthi isithathe isifundo kwakufanele ilandele eminyakeni embalwa edluleYize, ngokubona izinga lokukhula lale modeli entsha yebhizinisi, kubonakala sengathi ukulinda bekukufanele.
Obunye ubufakazi buyatholakala ekwethulweni kwale modeli entsha ye amboze imakethe yethebhulethi, imakethe lapho iSurface Pro ibingenalutho ngenxa yokusebenza kwayo okuphezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amakhompyutha » AmaLaptops » I-Surface Go: enye indlela eya kwi-iPad ne Windows 10 futhi cishe ngentengo efanayo
I-Android P ngeke ikuvumele ukuthi uxhume kumanethiwekhi e-Wi-Fi usebenzisa i-WPS
AbakwaNokia bayaqhubeka nokwenza izinto zabo kanti iNokia 3.1 isiyatholakala eSpain